Abwaanka ayaa dhinaca kale mudooyinkii danbe waxa uu waday olole ku saabsan dhinaca nabada iyo sidii ay bulshada Soomaliyeedi uga tanaasuli lahayd heyb sooca lagu sameeyo dadka ka soo jeeda beelaha Somaliyeed qaarkood. Abwaan Hadraawi, waxa uu dhawan tiriyay gabay uu ugu magac daray "Dhul gariir" oo uu kagaa hadlayo dhibka uu heyb soocu leeyahay iyo cawaaqibka xun ee ka dhalan kara hadii inta ay goori goor tahay aan laga gudbin ku dhaqankiisa. Abwaan hadraawi hada waxa u ku sugan yahay wadanka Canada waxaana uu BBC uga waramay sida uu arko qaraxyadii dhawaan ka dhacay Hargeisa. Gacan-siin Qoraal kaliya. Boggan waa la kaydiyay, waxba laguma qoro. Faahfaahin ku saabsan kaydinta boggan English.
British Broadcasting Corporation Home. Waxaad u baahan tahay Flash player sax ah si aad u daarto Maqal ama Muuqaal. Soo daji qaabkii ugu dambeeyay ee Flash Player. Maxamed Warsame Hadraawi waa abwaan ka mid ah abwaanada Soomaaliya ugu wayn. Hadraawi wuxuu qoray suugaan badan oo ka kooban gabayo, ruwaayado iyo heeso. Maxay yihiin kuwan? Maroodiga oo ka cabsada shinnida. Kerry waddan ayaa taageersan weerarka. Wareysi: Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maqal Wareysi: Raxma Ruuxi Maqal Faadumo Qaasim oo geeriyootay Maqal Shuruudda wax raadinta:.
Boggan waxaa sida ugu wanaagsan loogu daalacan karaa qaab waqtiga la socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha qaabaysan ee CSS. Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. Boggan waa la kaydiyay, waxba laguma qoro. Faahfaahin ku saabsan kaydinta boggan English.
Qaab la daabici karo. Daawo abwaan Maxamed Warsame Hadraawi. Heesaha uu sameeyay waxaa ka mid ah heesta hooyo ee uu qaado Maxamed Saleebaan. Qaab la daabici karo Calaamadayso: Maxay yihiin kuwan?
Delicious Facebook MySpace Twitter. Settings Sign out.
British Broadcasting Corporation Home. Waxaad u baahan tahay Flash player sax ah si aad u daarto Maqal ama Muuqaal. Soo daji qaabkii ugu dambeeyay ee Flash Player. Maxamed Warsame Hadraawi waa abwaan ka mid ah abwaanada Soomaaliya ugu wayn. Hadraawi wuxuu qoray suugaan badan oo ka kooban gabayo, ruwaayado iyo heeso.
Ku soo Dhawoow Mareegta Far-Shaxan. Tifatirayaasha Farshaxan way ka madax banaan yihiin fikradaha gaarka ah ee ku sugan halkan. Hordhac Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waa hal-abuur maanseed, oo dabuuubta maansadiisa kala soo dhex baxay dhudhubo shareeran iyo dhadhaaabo shuban dhexdood. Maansadiisu waa dawan, baaq, hodan, xigmad, murti iyo qaylo dhaan xilliga argagixiso jirto.
Hoobal Maansada HOOBAL, waa maanso qaali ah oo uu tiriyey Abwaanka caanka ah ee Soomaaliyeed, Profosor, Abwaan Maxamad Ibraahim Warsame Hadraawi, Abwaanku wuxuu si caajiib ah ugu caddaynayaa qiimaha uu ku fadhiyo Abwaanka Waddaniga ah, inuu mar walba ka gubto dhibaatada soo gaarta muwaadiniinta uu Afhayeenka u yahay, siiba kuwa masaakiinta ah, ee ama loo tabar sheegto ama loo dhaqaalo sheegto, Shaqsi ha dulmiyo ama Xukuumadu ha dulmisee. Wuxuu Abwaanku sheegayaa inuu yahay amaba ka sii horreeyo Idaacadaha Casriga ah ee ka hadla Hirarka dhaadheer, ee qof kasta halka uu joogo Akhbaarta ugu geeya, Wuxuu Abwaanku ka jawaabayaa Su'aalo fara badan, isagoo tilmaamaya sababtii magaca Hoobal loogu bixiyey , waxa kale oo uu tilmaamayaa, waxa ay yihiin Hiddihiisa, Hantidiisa iyo Hubkiisu iyo waxa uu mustaqbalka horumar la doonayo ummaddiisa. Waxa uu si cad Daaha uga qaadayaa inuu yahay Wakiilka guud ee ku toosinta Bulshadiisa Dhaqanka suubban ee Asalkiisu yahay Diinta sharafta leh, yahayna Macallinka joogtada ah ee ummaddiisa, inuu yahay sameeyaha Maahmaahyaha iyo murtida ay Bulshadu u adeegsato horumarka nolosheeda, in uu mar walba yahay ka sii digaha Cadawga ku soo wajahan ummaddiisa Gude iyo Dibedba , isla markaana yahay Difaacaha keliya ee aan ka gamban Halis kasta ee hawshiisa darteed loogu geysan karo. Ugu dambayn wuxuu Abwaanku leeyahay, kolley hawsha qiimaha badan leh ee abwaannimo, ee aan idiin hayo hal senti oo keliya igu siin maysaan, aniguna idinkuguma ciil qabee, waxa keliya oo aad ixsaan iigu samaysaan, in aad geeridayda kaddib, markaad murtidayda adeegsanaysaan, i xusuusantaan oo aad ii soo ducaysaan. Hub maxaad ka sidataa? Adduunyadu Hir weeyee, Maxaad haabanaysaa Maxaad haybinaysaa? Waxa Hoobal lay yiri, aan kuu higaadshee Hiddo waxaan ku dhaataa, Afkii hooyadeennoo Hanti waxan ka leeyahay, Suugaanta Hodanka ah Hubna waxan ka qaataa, Hal-abuurka mirahiyo Hannaankiyo sargooyada, Qalab lagu hufaayoo lagu haadinaayoo, Hugunkayga yeeraa, lagu Hawl galaayoo Heellooyinkaygaa, Bulsho lagu hagaayoo kan hallawsan weligii, lagu hoga-tusaayoo Hawraarahaygaa, Dhasha lagu habaayoo Dadku hadalladayduu, ka dhigtaa Hal-haysoo Dhegtu heesahaygay, Hanqal taag ku maqashaa Hayhaata meel aan, Halistiyo wax yeellada ka arkaa Hog dheeroo, Hooydayda yeedhaa Nacab soo hillaabtiyo, Horor lagu ogaadaa.